Nke a Fat Guy Hụrụ Coca-Cola Marketing | Martech Zone
Saturday, January 19, 2013 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 30, 2015 Douglas Karr
M karịrị abụba… n'ezie, Achọrọ m ida ibu nke nkezi nwoke na-azụ nnọọ abụba. Ọ ga-amasị m ịta ya ụta na ọrịa thyroid, mkpụrụ ndụ ihe nketa m, ọrụ m, ọnọdụ nrụgide m… ihe. Otú ọ dị, eziokwu bụ na ọ kwụ ọtọ. Mgbe m riri nri, mega ahụ́, efela m. Mgbe m na-emegaghị ahụ ma ọ bụ rie nri n’ụzọ ziri ezi, m na-ebuwanye ibu. N'oge nsogbu oge bụ mgbe m na-ahapụ ahụike m ma banye n'ime abyss… yana oge nrụgide karị na afọ ole na ole gara aga.
Ibu abuba abughi na enweghi ihe omuma banyere ihe oriri ma obu nghota mmeghari ahu na otu aru si aru oru. Adị m njikere ịkụ nzọ na m gụọkwu akwụkwọ, lelee ihe nkiri ndị ọzọ ma ghọta ihe banyere nri na-edozi ahụ karịa ọtụtụ ndị ahụike. Ọ ga-amasị m ịkụ nzọ na eburu m ibu karịa onye ọ bụla… ọtụtụ narị pound n'ime afọ. O bu ihe nwute, enwetala m ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ n'ihi enweghị ike m na ibute ahụike na nhazi ọrụ na ndụ m.
E wezụga ịhụnanya m maka ntụ ọka ọcha na shuga bụkwa ịhụnanya m maka ịntanetị na nnwere onwe. Internetntanetị na-enye ndị mmadụ ọhaneze ebe mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ekwesịghị ichere ka ndị nta akụkọ ma ọ bụ gọọmentị tinye ha ìhè. Otu ụlọ ọrụ nwere ike weghara ọrụ n'aka ya, wee mepụta ozi nke aka ya - na-enweghị nzacha, echiche, ma ọ bụ mmachi. Ọ bụ ya mere m ji hụ eziokwu ahụ n'anya Coca-Cola na-egbochi nsogbu ahụike jikọtara ya na ngwaahịa ya isi na usoro mgbasa ozi ọhụrụ.
Anyị bi n'ime ụwa ebe ọ bụla ihe ọ bụla dara oke njọ, anyị na-enwe ọfụma banyere ịtụ aka anyị na ịta onye ọzọ ụta karịa ịtụle etu anyị ga-esi metụta mgbanwe. Polọ ọrụ bụ ihe dị mfe, ọkachasị mgbe ha na-aba nnukwu uru. Lee ka o si dị mfe na ịta Coca-Cola ụta na ọrịa anyị buru ibu karịa ime ka ụmụaka anyị na-eme ihe omume n'èzí, na-etinye ekwentị anyị, na-aga mgbatị ahụ, ma ọ bụ na-eri ahụ ike. Anyị na-ata ụta ire ahia ahia uwa nile kama mgbanwe nke oru nke choro obere ma obu adighi ike.
Ihe dị n'ahịa ọ bụla bụ atụmatụ iji gbalịa ịmekwu ndị mmadụ ịzụta ngwaahịa gị ọtụtụ oge. Ekwetaghị m na ịzụ ahịa na-achịkwa mmadụ, mana ana m eche na ndị mmadụ na-ewere obere ọrụ maka omume ha. Onye ọ bụla maara na soda abụghị ihe ọ drinkụ drinkụ na-eme ka ndụ dị mma. Achọghị m Coca-Cola ịgwa m na… kama enwere m obi ụtọ na ha na-agwa onye ọ bụla na-ebuso ha eziokwu banyere ngwaahịa ha.
Site ... had Enwere m iko Coke ole na ole n'abalị ụnyaahụ, ha dịkwa egwu. Taa, m riri nri ụtụtụ dị mma, bechapụ nri, ma rie ezigbo nri abalị. Echi m na-eme atụmatụ ịgba ịnyịnya ígwè m (ana m arịa ọrịa taa mgbe m nọkwasịrị na nke mbụ na ọnwa gara aga). Achọghị m Coca-Cola ma ọ bụ gọọmentị ịgwa m na m kwesịrị itinye m but na igwe kwụ otu ebe echi.
Abụba m, abughi m onye nzuzu.
Akwa post Doug! Na-arụ ọrụ na ịbụ onye maara ihe na ahụike m ọnwa ole na ole gara aga yana n'ime 2013. Nke a bụ ịbụ onye maara ihe na onye nwere ọrụ karị na onye nzuzu na ịta ụta ihe ọ bụla ọzọ mana anyị onwe anyị!
Oh, na m mere ka soro nwanne m nwoke RAIN 2013 omume na July. Yabụ, a ga m enwetarịrị obere ihe ndina prepping maka nke ahụ.
Egwu! Jisie ike!!!
Approachzọ dị mma, dị ka ọ dị na mbụ, site na Coke. Echetara m ịgba chaa chaa - "kpọọ akpọrọ". Onwe gị, post a na-egosipụta ụfọdụ n'ime ezigbo àgwà gị kacha mma: ịbụ ezigbo na nghọta. Wezụga eziokwu ahụ bụ na ị bụ ọmarịcha ahịa, akparamagwa ndị a na - eme ka ị mata ihe dị iche na ngwugwu gị ma na - eme ka ụlọ ọrụ gị nwee ọganiihu Are bụ ezigbo mmadụ, Maazị Doug.
Daalụ @ twitter-9755792: disqus!
Enwere m obi abụọ n'ime ụlọ ahụ na-achọ na ha gaara eme nke a afọ 30 gara aga kama ichegbu onwe m maka abụba na uru? Na m na-asị asị na-amalite obi abụọ n'ihi na eziokwu na DK bụ azụ na-awakpo ndị igba mara mma.
Ọ dị mma na Coke na-eme ahụike maara ahịa dị mma - mana n'otu oge ahụ echere m na ọ bụ n'ihi na ego dị na ya ugbu a maka ndị na Atlanta. Soda na-enye gị ike ngwa ngwa ma mee ka mmiri gwụ gị n'otu oge, nke mere na ị gaghị enwe ike inwe otu. Ma ọ dịghị ihe ọzọ enweghị m ike. A naghị edozi nke ahụ. Ihe a na-agwa bụ na ndị mmadụ nwere ike ịgụta calorie ma drinkụọkwuo Coca-Cola ma were calorie si ebe ọzọ - dịka Chocolate ma ọ bụ soro cheeseburger kama Big Mac @ McDonalds.
Enweghị ndị mmụọ ozi na ahịa, mana ọgụ gị ziri ezi ma enwere m ekele maka gị, 'bromance.